कोरियामा लगातार तेश्रो दिन दैनिक को’रोना सं’क्रमित ४ हजार मुनि, हेरौं आज कति थपिए? – Eps Sathi
January 9, 2022 231
दक्षिण कोरियामा केहि दिन यता कोरोना सं’क्रम’ण केहि मथ्थर भएको देखिएको छ। कोरियामा गत ३ दिन देखि लगातार दैनिक सं’क्रमितहरुको संख्या ४ हजारभन्दा तल रहेको छ। सरकारले देशभर सामाजिक दूरीका नि’यममा गरेको क’डाईका कारण यो संख्या घटेको सर्वसाधारणहरुको बुझाई रहेको पाइएको छ।
कोरियामा आइतबार ३ हजार ३ सय ७६ सं’क्रमित थपिएका छन। यो संख्यासँगै दक्षिण कोरियामा अहिलेसम्मको कुल को’रो’ना सं’क्रमितहरुको संख्या ६ लाख ६४ हजार ३ सय ९१ पुगेको कोरिया रो’ग नि’यन्त्रण तथा रो’कथाम एजेन्सी ‘केडीसिए’ ले जानकारी दिएको छ। आइतबारको यो संख्यामा ३ हजार १ सय ४० जना स्थानिय सं’क्रमित हुन।
कोरियामा आइतबारको सं’क्रमित संख्या अघिल्लो दिन अर्थात शनिवारको भन्दा कम हो। शनिवार कोरियामा ३ हजार ५ सय १० जना सं’क्रमित थपिएका थिए भने शुक्रबार ३ हजार ७ सय १६ जनामा सं’क्रम’ण पुष्टि भएको थियो। त्यसैगरी कोरियामा को’रो’नाका कारण सि’किस्त बि’रा’मीहरुको संख्या पनि घट्दै गइरहेको देखिएको छ।
कोरियामा लगातार ६ दिनदेखि को’रो’नाका सि’कि’स्त बि’रा’मीहरुको संख्या १ हजारभन्दा तल रहन सफल भएको छ। आइतबार यो संख्या ८ सय २१ रहेको थियो। नोभेम्बरको सुरुवातबाट दक्षिण कोरियाको सरकारले सामाजिक दूरीका नि’यमहरु लचिलो बनाउँदै दैनिक जनजिवन सामान्य बनाउने योजना अघि सारेको थियो। ‘लिभिङ विथ को’रोना’ कार्यक्रम लागू गरेसँगै पुन कोरियामा सं’क्रम’ण फै’लिएपछि पुन सामाजिक दूरीका नि’यममा क’डाई गरिएको थियो।
गत डिसेम्बर १५ तारिख कोरियामा दैनिक सं’क्रमितहरुको संख्याले रेकर्ड बनाएको थियो। यस दिन कोरियामा ७ हजार ८ सय ४८ जना सं’क्रमित थपिएका थिए। यसपछि कोरिया सरकारले जनवरी २ देखि जनवरी १६ सम्मका लागि सामाजिक दूरिका नि’यममा क’डाई गर्ने घोषणा गरेको थियो। यस नियमअनुसार ब्यक्तिगत भेटघाटमा ४ जनासम्म मात्र भेला हुन पाइने तथा देशभरका रेष्टुरेन्ट तथा क्याफे व्यापार व्यवसायहरु बेलुकी ९ बजेपछि बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ।
Prevअब बारीमा गएर सित्तैमा टिकटक बनाउन पाईने छैन, एउटा टिकटकको मूल्य कति ?
Nextकोरियामा बढ्यो स्वास्थ बीमा प्रमियम (건강보험) , अब कामदारले यति तिर्नुपर्ने
केहि रकम दान गरेमा देश निकाला हुन लागेका विदेशीले कोरियामै बस्न पाउने